Barlamanka Holland oo u codeeyey mashruuc lagu mamnuucayo in xoolaha la gooraco – SBC
Barlamanka Holland oo u codeeyey mashruuc lagu mamnuucayo in xoolaha la gooraco
Posted by editor on June 29, 2011 Comments
Amsterdam:-Barlamanka Holland ayaa u codeeyey xeer cusub oo muran dhaliyey kaasi oo dhigaya mamnuucidda gooraca xoolaha sida muslimiinta iyo yuhuuda u gooraacaan.
Muslimiinta iyo Yuhuuda ayaa cabasho ka muujiyey xeerkan oo ay soo gudbiyeen labo xubnood oo barlamank katirsan kana soo jeeda xisbiga difaaca xuquuqda xayawaanka.
Xeerkan ayaa u baahan in uu meel mariyo golaha odayaasha si uu u noqdo mid dhaqan gala.
Hogaamiyaha xisbiga difaaca xuquuqda xayawaanka haweenayda lagu magcaabo Maryan Tim ayaa beenisay inta uusan barlamanku u ocdeen ka hor in mashruuca xeerka uu yahay weerar lagu qaadayo Diimaha laga tirade badan yahay.
Haweenaydan ayaa intaas ku dartay in xeerka uu yahay mid loo baahnaa sababtoo ah culimada ayaa isku waafaqday in xayawaanku uu xanuunsanayo ama cabsi la soo gudboonaanayso haddii aanan la miyir beelinin gooraca ka hor.
Tim oo la hadleysay BBC-da ayaa sheegtay in loo baahan yahay in koronto loo addegsado xayawaanka si uusan dhibaatada dhimashada uusan u dareemin taasna ay tahay mid loo baahan yahay in la adeegsado , waa sida ay hadalka u dhigtaye.
Muuqaal aanan horey looga baran Muslimiinta ku nool Holland ayaa cambaareeyey xeerkan waxayna ku tilmaameen in uu xadgudub ku yahay xoriyadooda Diineed.
Madaxa Yuhuuda Holland Binyomiin Jakuub ayaa sheegay in talaabadii ugu horeysay ee Naasiyiinta ay qaadeen dagaalkii labaad ee Dunida ay ahayd in ay diideen in Yuhuuda haraga ka bixiyaan xoolaha.
Jaakuub ayaa intaas raaciyey ” haddii ay jirto cid naga hor istaagayso dhaqanka aan u leenahay gooraca Holland , waxaan joojinaynaa hilibo cunidda”.
Muslimiinta ku nool dalalka Sweden, Norway iyo Switzerland ayaa ka soo dhoofsada hilibka dibadda , kadib markii ay xukuumadaha dalaalkaas ay xayiraad ku soo rogeen dhaqanka gooraca xoolaha.